Ihe Mbubata Mbubata na Mbupụ China (Canton Fair) 2021
Ihe ngosi Mbubata na Mbupụ nke China (Canton Fair) 2021
At Guangzhou - Canton Fair Mgbagwoju
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://www.cantonfair.org.cn
Categories: Ọrụ Ụlọ Ọrụ, iche
A na-ahazi ngosi ngosi Canton nke 131st n'etiti etiti ruo ngwụcha Eprel 2022. A ga-ekpebi usoro akọwapụtara na ọnụ ọgụgụ ihe omume ahụ dabere na ihe ndị dị ka ọnọdụ ọrịa na-efe efe na mgbochi na njikwa chọrọ.
Emere ihe ngosi mbubata na mbupụ nke China nke 130 (Canton Fair 2021 mgbụsị akwụkwọ) na ntanetị.
The 130th A ga -ahazi Canton Fair site na ụzọ atọ ruo n'otu oge. Nke 130th A ga -eme Canton Fair na ntanetị na ntanetị maka ụbọchị ise (Ọktọba 15 ruo 19). A ga -egosipụta ụdị ngwaahịa 16 na ngalaba 51. Mpaghara ihe ngosi ahụ ruru ihe dị ka square mita 400,000, yana ụlọ ọrụ ika dị ka ndị na-egosi ihe ngosi, na-elekwasị anya n'ịmepụta ihe ngosi akara dị elu iji kwalite mgbasa nke ụlọ na nke mba. Ihe ngosi ntanetị ga -edobe ụlọ ntu 60,000 wee gaa n'ihu na -enye nkwado azụmaahịa n'ịntanetị na ikpo okwu mgbanwe maka ụlọ ọrụ 26,000 na ndị na -azụ ụwa.
Ụlọ ihe ngosi VR, ụlọ ntu VR Global Business Matchmaking, na ngosi ịntanetị bụ ndị ngosi na ndụ. Ndị na -azụ ahịa ọhụrụ nwere ike ịdebanye aha na webụsaịtị gọọmentị site na dejupụta naanị ozi ise. Ndị na -azụ ahịa oge niile nwere ike banye site na inyocha akara ha ma ọ bụ NJ (paspọtụ). Kama ikewa ya ụzọ atọ, ndị ngosi niile sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche ga -egosipụta n'otu oge awa 24 kwa ụbọchị maka ngụkọta ụbọchị iri. Ngalaba 16, ngalaba ihe ngosi 50, na -egosi ihe karịrị nde ngwaahịa 2.4 na -ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ngwaahịa mbupụ niile nke China.
Tags: Industrylọ ọrụ na-ebubata ngwaahịa, Mbubata na Mbupu Mbupu, ọnụ ọgụgụ obodo, Ngosipụta Mbubata na Mbupụ China, ibubata na china, mbupụ China, online canton ngosi, canton ngosi online, nnukwu ngosi, guangzhou ngosi, canton ahia ngosi, guangzhou ahia ngosi, guangzhou ahia ahia, ihe ngosi ahia canton
mario 1 ọnwa 1 ụbọchị
shebatrade Oge 1 ọnwa
اذا كان لديك اي استفسار بخصوص المعرض يمكنك ايضا التواصل معنا على استفساراتك
Mona Oge 1 ọnwa
Enwere m mmasị ịma ebe na mgbe ngosi a ga -eme ya maka 2022 ịbịa malite azụmahịa nke m.
Alen ka Mona Oge 1 ọnwa
Ị nwere ike izitere m nọmba kọntaktị gị ihe bụ ngwa ma ọ bụ wechat ka ị nweta ozi ndị ọzọ,
Mona Aymierw Oge 1 ọnwa
Ozi banyere ngosi
Enwere m mmasị ịma ebe na mgbe a ga -eme ngosi ahụ maka 2022 ka m nwee ike ịga.
Alen Ọnwa 2 ọnwa iri na otu
Canton ngosi 130
Ndewo onye ọ bụla, m na -enye ọrụ nke mkparịta ụka na ịchọ ngwongwo na ihe ngosi Canton Fair130, PM m site na email
Добрый день, оказываю услуги поиска товаров и ведение переговоров с фабриками na Canton Fair130, пишите на па
Scott Young Oge 1 ọnwa
Ọ ga -amasị gị inyere aka chọta/iwepụta ndị na -emepụta ihe maka ngwaahịa ekeresimesi. Na -azụ ahịa ugbu a site na China mana enwebeghị ike ịchọta ogo na ụdị ngwaahịa.
Alen Oge 1 ọnwa
Ee, anyị nwere ike ịkpọtụrụ site na ngwa ma ọ bụ wechat,
Zitere m nọmba ekwentị gị ozugbo, wechat ma ọ bụ nọmba ngwa zitere email:[email protected]